Tantara mandaloPosté par Berïnson 2014-10-18 09:07
- Naneno ny lakolosy fidirana. Nihazakazaka nifanesika teo am-baravarana ny ankizy rehetra. Izaho niandry faramparany vao niditra. Ianao avy niresaka tamin'ireo namanao handeha hipetraka ery amin'ny toeranao no hitako voalohany raha vao niditra tao an-dakilasy aho. Toerana raikitra mantsy no nametrahan'ny mpampianatra antsika. Ny toeranao ery amin'ny ankavia indrindra. Mihorirana miankina amin'ny rindrina matetika ianao. Ny toerako eo aloha ampovoany manoloana ny latabatry ny mpampianatra. Mijery anao matetika aho saingy angamba tsy voamarikao. Na tsikaritrao ihany saingy mety ho noheverinao ho zaza loatra aho ho anao Iza tokoa moa no tsy mahalala ny ditra sy haherisetran'i Tsito? Tsy ny karazan'ankizivavy toa ahy no fanatonao resahina fa ny toa an-dry...
- Aoka izay, Tsiry a! Tsaroako daholo ireny. Tsaroako ilay ianao mpanangan-tanana lava mifaninana tsy an-kiteny amiko. Raha tsy ianao mantsy dia izaho foana no mahazo ny naoty tsara indrindra ao am-pianarana. Tsaroako koa fa rehefa fakan-drivotra dia tsy maintsy manao dihim-bazaha ianao; ianao ilay mpihazakaza-dava, na miakatra ny tohatra iny aza ny mankao amin'ny zanaky ny lehiben'ny sekoly. Zipo mena sy mavokely no ifanarahanareo ifandimbiasana anaovana Tsaroako koa ilay endrikao malahelo kely iny rehefa tsy faly aminao i Rova noho ianao miara-milalao amin'i Sahondra.
- Izany tokoa ô? Samy namako tiako izy roa ireny...
- Ary tsaroanao ilay ianareo sy i Felana mpankao an-damosin'ny efitrano fianarana? Mifaninana mikosoka ny lanton-tanana ianareo dia izay maimbo indrindra no mandresy. Raha tsy izany dia tapitra tapahinareo ny karazana ravinkazo horohinareo izay maimbo indrindra Indray mandeha izay tezitra mafy izy fa hay ianao nivimbina antsokosoko ravina laingomaimbo avy any an-trano.
- Aiza kosa e?
- Tsy i Tsito ihany anie no nahery setra tamin'ireny fa na i Tsiry koa aza e! Iza no nitondra antsokosoko taikilotra tao am-pianarana isoketana ilay mpampianatra malagasy? Dia iza koa no nanafina ny fitsipika lehiben'ilay mpampianatra matematika? Iza no nametraka ilay tanalahy tao amin'ny vatasarihin'ilay mpampianatra zavaboahary? Hitako daholo ange ireny e... Na ny topitopy masonao tamiko nanjary nafindranao tany amin'i Tsilavo aza hitako ihany koa...
- Tsito a! Nahoana ianao no tsy mba niloa-bava niresaka tamiko mihitsy tamin'ireny?
- Tena tianao ho fantatra? Tiako loatra ianao ka natahotra ny handratra anao aho.
- Na androany aza...